Budata Cyotek Gif Animator maka Windows
Budata Cyotek Gif Animator
Free Budata maka Windows (3.50 MB)
Budata Cyotek Gif Animator,
Cyotek Gif Animator bụ ngwa na-edezi onyonyo dị oke mma emebere maka ndị ọrụ imepụta faịlụ onyonyo GIF ọkachamara. Notu oge ahụ, mmemme nke na-enye gị ohere dezie faịlụ GIF ị nwere bara ezigbo uru.
Agbanyeghị na ọ bụghị ihe ọhụrụ maka ndị ọrụ imepụta animation site nịgbakwunye foto notu notu, Cyotek Gif Animator na-ewere nzọụkwụ a nihu site nenyemaka nke ngwaọrụ ya dị elu, na-enye ndị ọrụ ohere ịkwadebe animation nke ha ngwa ngwa.
Na-akwado ụdị ihe oyiyi a kacha mara amara dị ka JPG , JPEG , PNG , BMP , TIF , EMF , WMF , JPE , DIB , RLE na Nezie GIF, usoro ihe omume ahụ na-enye gị ohere ijikọta faịlụ oyiyi niile ị nwere site nenyemaka nke dị iche iche. mmetụta, ntụgharị na nzacha ma mepụta faịlụ GIF nke gị. Ọ na-enyere gị aka ịkwado. Notu oge ahụ, ị ​​nwere ike ịhụchalụ GIF faịlụ ndị ị kwadebere tupu ị na-azọpụta ha, na ọ bụrụ na i nwere ihe ọ bụla njehie, ị nwere ike ịzọpụta ha mgbe mezie ha.
Nikpeazụ, usoro ihe omume ahụ, nke na-enye nkwado ahịrị iwu maka ndị ọrụ dị elu, na-enyekwa ndị ọrụ ohere ịmepụta ọnọdụ nke ha ma rụọ ọrụ ngwa ngwa.
Nikpeazụ, ọ bụrụ na ịchọrọ ngwanrọ efu nke nwere ike ịmepụta na dezie faịlụ GIF, ị kwesịrị ịnwale Cyotek Gif Animator.
Cyotek Gif Animator Ụdịdị
Nha faịlụ: 3.50 MB